DAAWO: Ciidamada Itoobiya ee Kismaayo oo laga hortagay dhaqdhaqaaq ay sameyn lahaayen &Sababta.
KISMAAYO(P-TIMES) – Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in ay ciidamada Amniga ee Jubbaland is hor istaag ku sameeyeen ciidamada Itoobiya ee kusugan magaaladaas oo doonayay in ay galaan dekeda Kismaayo.
Ciidamada Jubbaland oo fulinaya amarka guddiga Amniga ee magaalada Kismaayo ayaa sheegay in aysan ciidana sameyn karin dhaqdhaqaaq ciidan, gaar ahaana maalmaha doorashooyinka, ayna waajib tahay in Dastuurka Jubbaland la ixtiraamo.
Guddiga Amniga ee Jubbaland waxay xalay soo saareen in gabi ahaanba aan sadex maalmood cidna sameyn karin wax dhaqdhaqaaq ciidan ah, sidaas oo kalena sugida Amniga ay gacanta ku heynayaan Booliska Jubbaland iyo kan AMISOM.
HALKAN KA DAAWO WARARKII U DAMBEEYEY
Ciidamada Itoobiya waxay doonayeen in ay galaan dekeda magaalada Kismaayo, oo ay ka rartaan raashin maalmihii u dambeeyey soo dagay, laakiin taasi waxaa diiday ciidanka Amniga oo degan jidka ay soo maraan, waxayna sheegeen in ay iyagu u sameynayaan oo u keenayaan.
Itoobiya ayaa saameyn siyaasadeed doonaysa in ay ku sameyso doorashada Jubbaland, waxaana ay wajahaysaa marxalad adag, maadaama ay halkaas joogaan ciidamada Kenya oo Iyana qeyb ka ah howlgalka AMISOM.
Ma’ogtihin Cidamada Xabashida ee Magaca Amisoom ku joga somaliya gar ahan jubbaland & Cidamada Mamulka jubbaland in aay is yaqanin siiba dhanka Dagalka? %80 Askarta jubaland waxay kayimaden dhulka ismamulka somalida itoobiya,wa ciidan si fican u dhisan oo tababaran oo wax badan Dagal ku dhexmaray iyaga & Cidamada itoobiya Xata waxa laga heli kara Qar badan oo ah 0nlf oo hader qaybo kamid aay heshis wada gareen iyaga iyo xukumada tibiya markii maro lowayey dagalyahanka 0gadeen oo waqti dheer dagal kala jogsi lahan lagalen xukumadihi kala danbeyey ee katalin jiray dhulka itoobiya,tas waxan uga danleyahay dadka manta umaleynaya in cidamada nabad ilalinta itoobiya ee ku sugan magalada kismanyo oo Donaya in aay Axmed madobe ka horistagan in uu xilka jubbaland isu sharaxo,Cidamadas oo fulinya Nidamka sharci darada ah ee aay wada gareen madaxweynaha somaliya maxamed Abdullahi farmajo & R/wasaraha itoobiya Abiye Axmed ali,nimankas waxay ku shirgoben wax aan sharci ahan oo ah in itoobiya & somaliya laysku daro taas oo dadka somaliyed %99 aay ka so horjedan akhirkana ku dhaman doonta guldaro.